Mövenpick Hotels & Resorts iri kutora kudzoreredza kwekushanya kweTunisia kubhangi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tunisia Kupwanya Nhau » Mövenpick Hotels & Resorts iri kutora kudzoreredza kwekushanya kweTunisia kubhangi
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Tunisia Kupwanya Nhau
Iri ndiro gore rezve kupora chaiko kweindasitiri yekushanya yeTunisia. Moevenpick Mahotera neResorts nhasi chete zvange zvichiti iri kusimbisa nhare yayo muTunisia nekutora hotera yemazuva ano iri mumahombekombe eguta reSfax. Sangano revaSwitzerland rekugamuchira vaeni rakasaina chibvumirano neSociété Touristique du Sud yekugadzirisa Plaza Sfax & Spa Hotel, inzvimbo yepamusoro mudhorobha repakati peRue Khalid Ibn Walid, padhuze nenhoroondo yeMedina. Ihotera iri kufamba ipfupi kuenda kunzvimbo yemusangano, chimwe chiratidzo zvakare MICE, musangano uye indasitiri yekukurudzira inotarisirwa kutarisa kuTunisia zvakare.
Plaza Sfax & Spa Hotera, Tunis
Zvinotaridza indasitiri yekushanya yeTunisia pakupedzisira yave kusimukira zvakare. Mushure mekurwadziswa kukuru kwekutyisidzira kwenzvimbo dzekushanya ino Nyika yekuchamhembe kweAfrica iri kuyedza nesimba kuti ive nzvimbo yekufarira zvakare kune veEuropean. Munguva yakapfuura maGerman neFrance vaive vakabata nhamba dzevashanyi ino nyika yeMediterranean.
"Pane kuvandudzika kukuru," Gurukota rezveKushanya, Selma Elloumi Rekik akaudza venhau ve AFP svondo rapfuura. Nhamba dzevashanyi dzakawedzera mwedzi mishanu yekutanga ya2014, zvikuru nekuda kwekukwira kweRussia neChina.
Kurwiswa kwejihadist kwegore ra2015 kwakaparadza indasitiri yekushanya yeTunisia. Kurwiswa kuNational Bardo Museum muTunis uye kumwe kunongedza nzvimbo yekutandarira yemahombekombe muSousse pamwechete kwakauraya vashanyi vekunze makumi mashanu nevatanhatu nemurindi weTunisia.
Asi vashanyi vanosvika gore rino vasvika mamirioni e2.3, kuwedzera kweanopfuura makumi maviri muzana kubva panguva imwecheteyo gore rapfuura uye 20 muzana yakakwira kupfuura panguva imwe chete muna 5.7.
"Iri igore rezvekupora chaiko," akadaro Elloumi.